प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार, फिजियोथेरापी सुरु
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार, फिजियोथेरापी सुरु
काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षाकृत सुधार आएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा बुधबार ओलीको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । हाल आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार फिजियोथेरापी गराइएको छ । पहिलाभन्दा अहिले उनको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको उपचारमा संलग्न डा. अरुण सायमीले बताए । ‘प्रत्यारोपण गर्नुअघि शरीरका भित्री अंगमा कस्तो समस्या छ भन्ने जानकारी थिएन,’ डा. सायमीले भने, ‘अहिले सबै परीक्षण गरिएको छ । उहाँमा कुनै समस्या छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीका सबै ‘भाइटल’ तथा ‘ल्याब’ सूचक सामान्य अवस्थामा रहेको अस्पतालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । ओली उठेर बस्ने, हिँड्ने, कालो चिया खाने, ठोस खानेकुरा खाने र दिसापिसाब गर्न जाने अवस्थामा पुगेको डा. सायमीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणले आफ्नो आयु १५ वर्ष सहज रूपमा बढेको चिकित्सकहरूसँग बताएका छन् । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग उनले गरेको कुराकानी उद्धृत गर्दै डा. सायमीले भने, ‘तपाईंहरूले प्रत्यारोपण गरिदिएको नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालिहाल्यो, कम्तीमा १५ वर्ष काम गरिहाल्ला, त्यसपछि त नयाँ–नयाँ डिभाइसहरू फेरि आइहाल्लान् नि । मेरा बा अहिले ९० वर्ष पुग्नुभयो, म पनि कम्तीमा त्यति त बाँच्छु नै ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको मनोबल उच्च रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटमा रोक
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संक्रमणबाट जोगाउन अस्पताल प्रशासनले शल्यचिकित्सक, उपचार टिममा रहेका फिजिसियनबाहेक अरूलाई भेट्न दिएको छैन । प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवालीका अनुसार प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई भने टेलिफोनमा कुराकानी गराइएको छ । प्रधानमन्त्री संक्रमणबाट मात्रै जोगिएमा कुनै समस्या नआउने डा. सायमीले बताए ।
ओलीले अमेरिकामा गर्न लागेको प्रत्यारोपण क्यान्सिल गराएर नेपालकै अस्पताल रोजेका थिए । अमेरिकामा प्रत्यारोपणको सबै तयारी छाडेर प्रधानमन्त्रीले शिक्षण अस्पताल रोजेको एक चिकित्सकले बताए । उनका अनुसार अमेरिकामा प्रत्यारोपणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो । मिर्गौला प्रत्यारोपण गराउनुअघि र पछि ओलीले चिकित्सकलाई के–कस्तो हुन्छ भनेर नसोधेको डा. ज्ञवालीले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान दिने समीक्षा संग्रौला ज्ञवालीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हँुदै गएको र उनलाई ठोस खानेकुरा दिन थालिएको अस्पतालले बताएको छ ।
ग्रान्डी अस्पतालमा दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण
ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा शुक्रबार ४२ वर्षीय पुरुषको दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । उनको १२ वर्षअघि पहिलोपटक भारतमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । प्रत्यारोपित मिर्गाैलाले काम गर्न छोडेपछि दोस्रोपटक प्रत्यारोपण गरिएको हो । ३६ वर्षीया श्रीमतीले उनलाई मिर्गाैला दान गरेकी थिइन् । उनीहरूको नाम भने खुलाइएको छैन । प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गर्न सुरु गरिसकेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ । प्रत्यारोपण टिममा प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली, डा. पवन चालिसे, डा. भोजराज लुइँटेल र डा. सुरेन्द्र अधिकारी तथा प्रा.डा. दिव्यासिंह साह, डा. विष्णु पहाडी, डा. उपेन्द्र जोशी सहभागी थिए ।